China kuhlinzwa imaski Ukwakha futhi Factory | Ubuchwepheshe Bezokwelapha Obusekelwe Ebufakazini
Lo mkhiqizo usebenzisa ukuhlunga okuyizitezi ezintathu. Izinqubo zokukhiqiza eziyinhloko zifaka ukuncibilika okushaywayo, i-spunbond, umoya oshisayo noma isibhakela senaliti, njll., Esinomsebenzi wokumelana noketshezi, izinhlayiya zokuhlunga namagciwane. Iziqu eziphelele, imikhiqizo iqinisekisiwe, indwangu yokuhlunga indwangu yokuhlunga emithathu + indwangu yokuvikela indwangu engalukwanga iphezulu, umsebenzi nesikole kuyaphuma, qapha njalo, isitayela esikhethekile sehlobo, ukukhanya nokuphefumula, Kufanela ubuso, akuxegi, ukumelana okuphansi , ayibambi umoya, imichilo yendlebe eyisicaba ephezulu, inethezekile ukugqokwa futhi ayiqinisi izindlebe.
1. Ibanga elijwayelekile lokuhlinzwa kwezokwelapha, indwangu yokuncibilika kwezokwelapha.
2. Lo mkhiqizo unokusebenza okungcono kokuvikela okungamasendlalelo amathathu nokuvikela, uvimbela ngempumelelo izinhlayiya zebacteria.
3. Vimba ngempumelelo ukusakazeka kwegazi, uketshezi lomzimba kanye nokuchaphazeleka ngesikhathi sokuhlinzwa okungafuneki.
4. Isikrini sesihlungi esinezendlalelo eziningi singahlunga ngempumelelo ungqimba ngongqimba futhi sikujabulele ukuphefumula kangcono.
5. Izendlalelo ezintathu zendwangu yentambo engalukiwe, ungqimba oluncibilikisiwe nolweluko ​​olungolukanga isikhumba luyasebenza futhi luphephile ekunakekelweni.
6. Ukumelana nokuphefumula okuphansi, ukuhlunga komoya okuphezulu, okugoqiwe ukwakha isikhala sokuphefumula esinama-360 °, ngaphandle kwezindlebe.
7. Idizayini yokuguqulwa kobuso ifaneleka ngokwengeziwe, futhi ukwakheka kobuso obuningi kwandisa ubuhle.
8. Idizayini ebopha ohlangothini yesiqeshana sekhala leplastiki elingabonakali lihle kakhulu!
Lo mkhiqizo uhlanzwe nge-ethylene oxide futhi ulungele abasebenzi bezokwelapha kanye nabasebenzi abahlobene nabo, abagqoke izindawo ezibhedlela, ezikoleni, emayunithi, ezinxanxatheleni zezitolo nasezindaweni zomphakathi.
Ilungele ukuvikelwa okuyisisekelo kwabasebenzi bezokwelapha noma izisebenzi ezihlobene nakho, kanye nokuvikelwa ekusakazekeni kwegazi, uketshezi lomzimba kanye nokuchaphazeleka ngesikhathi sokuhlinzwa. Izinga lokuvikelwa liphakathi futhi linokusebenza okuthile kokuvikela ukuphefumula. Igqokwa ikakhulukazi endaweni ehlanzekile enezinga lokuhlanzeka elingu-100,000 noma ngaphansi, isebenza egumbini lokuhlinza, iziguli ezihlengikazi ezinomzimba ophansi wokuzivikela, nokwenza imisebenzi yokubhoboza umgodi womzimba. Imaski yokuhlinza yezokwelapha ingavimba amabhaktheriya amaningi namanye amagciwane, ivimbele abasebenzi bezokwelapha ukuthi bangatheleleki, futhi ngesikhathi esifanayo ivimbele ukukhishwa okuqondile kwamagciwane athwala umoya wabasebenzi bezokwelapha, okubeka engcupheni iziguli ezihlinzwa. Amaski wokuhlinza wezokwelapha adinga ukusebenza kahle kokuhlunga okungaphezu kwama-95% kubhaktheriya. Izimaski zokuhlinza zezokwelapha ezilahlwayo nazo kufanele zinikezwe iziguli eziphefumulayo ezisolisayo ukuvimbela usongo lokutheleleka kwezinye izisebenzi zesibhedlela nokunciphisa ubungozi bokutheleleka ngokuwela.
Izinhlobo ze: Amaski wezokwelapha Eyabantu: Abasebenzi bezokwelapha noma abasebenzi abahlobene nabo
okujwayelekile: YY0469-2004 Hlunga ileveli: 99%
Indawo yokukhiqiza: Isifundazwe saseHebei Umkhiqizo: Uthando lungenza
imodeli: Ibhande lendlebe Uhlobo lwe-disinfection: I-Ethylene oxide
usayizi: 17.5 * 9.5cm Isitifiketi sekhwalithi: Ngabe
Impilo eshalofini: 3 iminyaka Ukuhlukaniswa kwensimbi: Izinga 2
izinga lokuphepha: 0469-2011 imaski yokuhlinzwa yezokwelapha igama lomkhiqizo: Imaski yokuhlinza yezokwelapha elahlwayo
itheku: Itheku laseTianjin indlela yokukhokha: Incwadi yesikweletu noma yokudlulisa ngocingo
1. Sebenzisa imaski ukumboza ngokucophelela umlomo nekhala bese uzibopha ziqine ukunciphisa igebe phakathi kobuso nemaskhi;
2. Uma usetshenziswa, gwema ukuthinta imaski-ngemuva kokuthinta imaski esetshenzisiwe, ngokwesibonelo, ukususa noma ukuhlanza imaski, geza izandla zakho ngensipho namanzi noma usebenzise i-sanitizer yezandla zotshwala;
3. Ngemuva kokuthi imaski imanzi noma ingcoliswe umswakama, gqoka imaski entsha ehlanzekile neyomile;
4. Ungasebenzisi kabusha izifihla-buso ezilahlwayo. Amaski alahlwayo kufanele alahlwe ngemuva kokusetshenziswa ngakunye.
1. Izimaski ezijwayelekile zezokwelapha kufanele zishintshwe ngemuva kwamahora ama-4 okusetshenziswa futhi ngeke zisasetshenziswa futhi; futhi uma uvele ulahle udoti phansi futhi ungathinti abanye abantu, ungafaka imaski endaweni enomoya, eyomile nenempilo, noma uyibeke endaweni ehlanzekile. , Esikhwameni sephepha esinomoya osetshenziswayo.
2. Uma ufaka imaski, kungcono ukuyigcina ngokuhlukile bese ukhombisa umuntu oyisebenzisayo ukuvimba abanye ukuthi bangayithathi futhi bayisebenzise ngephutha, okudala ubungozi bokutheleleka.
3. Kumaski wokuhlinza wezokwelapha, isibulala-magciwane, utshwala, njll. Akunakusetshenziselwa ukubulala amagciwane, futhi ngisho nangaphezulu akukwazi ukugezwa ngamanzi. Ngemuva kokusebenzisa, zifake esikhwameni noma emgqonyeni kadoti wamaski ezokwelapha.
4. Kuma-maski e-gauze kakotini, singawahlanza futhi sibulale amagciwane. Uma kunokwenzeka, kunconywa ukusebenzisa ukukhanya kwe-ultraviolet ukukhipha igciwane.
Langaphambilini Indlebe eboshelwe indlebe
Olandelayo: Izingubo zokuvikela
Imaski yokuvikela ezilahlwayo elahlwayo